ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်နှင့်Myanmar C. P. Livestock Co., Ltd. တို့၏ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် ပေတောခေတ်မီဥစားကြက်ခြံစီမံကိန်း သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း အခမ်းအနား
ပေတောကျေးရွာ ဥစားကြက်ခြံ စီမံကိန်း သဘောတူစာချုပ် အောင်မြင်စွာ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း အထိမ်းအမှတ်အနေဖြင့် ဧရာဝတီဘဏ်၊ ပေတောကျေးရွာရန်ပုံငွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်း နှင့် Myanmar C.P. Livestock မှ အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ဝင်များသည် ပေတောကျေးရွာ အသင်းဥက္ကဋ္ဌနေအိမ်သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ကာ အဖွဲ့လိုက် အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းနှင့် သဘောတူစာချုပ်များ ဖလှယ်ခြင်းတို့ကို ကျေးရွာနေပြည်သူများ ရှေ့မှောက်တွင် ၂၀၁၉ခုနှစ် ဧပြီလ ၃၀ရက်နေ့၌ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါ စီမံကိန်းသည် ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်မှ သက်သာသောအတိုးနှုန်းဖြင့် နှစ်ရှည်ချေးငွေ ပံ့ပိုးကူညီအကောင်ထည်ဖော်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပြီးပေတောကျေးရွာ ရန်ပုံငွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်း၊ ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်နှင့်Myanmar C.P. Livestock Co. Ltd. တို့အကြား အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပေတောကျေးရွာပိုင်မြေယာအားနိုင်ငံတော်မှခိုင်မာသောမြေအမျိုးအစားဖြစ်အောင်ခွင့်ပြုဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး လိုအပ်သော ခေတ်မီ မွေးမြူရေး နည်းပညာပိုင်းကို Myanmar C.P. Livestock မှ ပံ့ပိုးပေးကာ ဧရာဝတီဘဏ်မှ ချေးငွေကဏ္ဍပိုင်းတွင် သက်သာသောအတိုးနှုန်းနှင့် နှစ်ရှည် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။
ထို့နောက်ရွာလုံးကျွတ်အလှူအခမ်းအနားအားကျေးရွာစာသင်ကျောင်းဝင်းတွင်ပြုလုပ်ကာနေ့လည်စာ ဖြင့်တည်ခင်းဧည့်ခံ၍မင်္ဂလာရွှေမိုးငွေမိုးပေါက်ပေါက်ဆုပ်များရွာသွန်းဖြိုး၍ရွာသူရွာသားများမှတစ်ပျော်တစ်ပါး ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။
ယခုစီမံကိန်းတွင်ဥစားကြက်ကောင်ရေ ၂၅,ဝ၀ဝ စီပါဝင်သော ကြက်ခြံ ၃ခြံမှ နေ့စဉ် ကြက်ဥအလုံးရေ ၆၀,ဝ၀ဝ အနည်းဆုံး ဈေးကွက်သို့ တင်ပို့နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာအတွက် ခိုင်မာသော ရေရှည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီဖြစ်သည့်အပြင် ဒေသခံများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများလည်း ရရှိစေပါသည်။
ဧရာဝတီဘဏ်မှယခုစီမံကိန်းကိုသက်သာသောအတိုးနှုန်းဖြင့် နှစ်ရှည်ချေးငွေ ပံ့ပိုးထားပြီး နောက်ထပ် အလားတူစီမံကိန်းများကိုမြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီး၌အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရာတွင်ဆက် လက်ပါဝင်ပံ့ပိုးသွားမည်ဖြစ်ပြီးကျေးလက်နေပြည်သူအခြေခံလူတန်းစားတို့၏ဝင်ငွေတိုးတက်စေရေးကို အားပေးကူညီသွားရန် ရည်သန်ထားပါသည်။
← Max Myanmar Group၊ AYA Financial Group နဲ့ Novotel Yangon Max ဝန်ထမ်းများရဲ့ ရုံးတွင်းသင်္ကြန် (နှစ်သစ်အတာသင်္ကြန် အကြို) Atar Splash 2019